Xayeysiinta iyo Suuqgeynta Cilmi-nafsiga ee Infographic
Cilmi-nafsiga Sneaky ee Xayeysiinta
Axad, Juun 17, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Kani waa macluumaad wanaagsan oo ka socda BuySellAds, oo la yiraahdo Cilmi-nafsiga Sneaky ee Xayeysiinta. Qaar ka mid ah tan maahan xayeysiin fudud, sidoo kale waa istiraatiijiyad suuq geyn guud ah. Waxaan u jeedaa Xayeysiinta sida dhacdada… ama jillaab.. laakiin Suuqgeyntu waa dhammaan qorshaynta iyo istiraatiijiyadda u horseedda horumarinta Xayeysiinta.
Qof kasta oo inaga mid ah waxaa maalin walba la soo bandhigaa 3,000 ilaa 10,000 nooc oo bandhig ah iyada oo loo marayo xayaysiisyada TV-yada, boorarka banaanka, boorarka websaydhka, iyo xitaa funaanadaha deriska ah ama koobabka kafeega ee shaqaalaha. Sababtoo ah waxaa nagu soo qulqulaya xayeysiis, suuqleydu waxay soo saaraan cilmi baaristii ugu dambeysay ee cilmi-nafsi waxayna shaqaaleeyaan tabaha kala duwan si ay dareenkeena u qabsadaan una kasbadaan kalsoonida macaamiisheena
Ma u malaynaysaa inay tani tahay dhuumaaleysi? Mise si fudud ayey ugu ciyaartaa waxa aan wada dooneyno? Waxaan dooneynaa inaan noqono dad hal abuur leh… hadii aan iibsano Apple waxay naga caawineysaa inaan aaminno inaan nahay, ma wax xun baa? Iyo, qaabka Apple ee ka sarreeya qalabkooda - miyaanay caadi ahaan iibsan doonin Apple wax badan, hadba? Marka… dib u milicsiga users isticmaaleyaasha Apple miyey abuureen wax abuur badan? Waxaan u maleynayaa inay noqon karaan!
Fiidiyow: Foomamka Websaydhka iyo Bogagga Degista ee leh Foormo
Waxaan Leeyahay Dambi Baraha Bulshada
Jul 17, 2011 markay tahay 11:27 PM
Waxaan u maleynayaa in Apple ay leedahay suuqgeynta tikniyoolajiyadda adduunka ugu fiican. Wax soo saarkoodu ma ahan kuwa ugu fiican dhamaan qeybaha kala duwan walina astaanta Apple maskaxdeeda waxaa ka galay malaayiin waana aragtidayda inay tahay nooca ugu fiican aduunka ee xilligan la joogo.
Calaamadeynta Android (iyada oo loo marayo HTC iyo clones) ayaa bilaabeysa inay saameyn la mid ah ku yeelato suuqa taleefanka OS iyo Samsung / Sony waxay leedahay calaamado xariifnimo sidoo kale uma muuqato inay ku guuleysatay suuqa Mareykanka laakiin aad ayey ugu xoogan tahay Aasiya.
Malaayiin ka mid ah wiilasha taageersan Apple ayaa micnaheedu yahay in mowjadaha warbaahinta bulshada ay ka buuxaan dad taageeraya astaanta markasta oo ay Apple cillad soo saartana ay si deg deg ah ugu boodaan difaaca Apple ilaa Apple ka xaliyo dhibaatada (Eg hore anteenada dhibaatada leh iphone4)
Jul 22, 2011 markay tahay 4:58 PM
Dadka badankood waxay u muuqdaan kuwo gebi ahaanba ilowsan inta warbaahinta iyo dejinta waxbarashadu saameyn ku yeeshaan dhaqankooda. Nasiib wanaag kuma shaqeynayo qof walba. Waxaan u baahannahay inaan fahanno waxa ku dhiirrigeliya macaamiisha mustaqbalka inay ka faa'iideystaan ​​macaamiisheenna; si kastaba ha noqotee, shirkado badan ayaa tan aad u fog ku qaatay xayeysiis si cad loogu galmooday.
Sidee u illownay waxaa naloo arki karaa sida shirkado badani noogu muujiyeen cayayaanno ama 'ilo'. Waxaa jira ganacsi gawaari heer sare ah oo hada ka socda Hulu oo muujinaya dhamaan noocyada dadka fadhiya wadada iyagoo ku rinjiyeeynaya burushyo yaryar ama faaruqinta ama ku fuulaya nalka wadada si shimbiraha looga kabo. Labaduba waxay muujinayaan waxa ay shirkadahaani naga aaminsan yihiin: dhiqlaha ama addoommada.
Waan ku faraxsanahay in xogtan ay ku xusan tahay astaamaha. Waxaan ku dhiirrigelinayaa dadka inay fiiro gaar ah u yeeshaan astaamaha astaamaha, xayeysiiska iyo baahinta warbaahinta. YouTube waa meel aad u fiican oo laga helo fiidiyowyo naga wada dhigaya dhammaanteenba inaan ka warqabno macnaha astaamaha. Isku day raadinta astaanta astaanta.